ကိုးတန်းကျောင်းသား ကျွန်တော့ရဲ့ရှင်းတမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုးတန်းကျောင်းသား ကျွန်တော့ရဲ့ရှင်းတမ်း
Posted by Burma on Oct 11, 2011 in Copy/Paste | 26 comments
♦ ကျွန်တော့ရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ပညာအရည်အချင်း န၀မတန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က န၀မတန်းကျောင်းသားဖြစ်မယ်လို့ ပြောသွားတဲ့အတွက်တကယ်ကို ရယ်ချင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ န၀မတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက် ဟာ ဒီလိုမရေးနိုင်ဖူးလို့ ထင်နေတဲ့သူရှိနေသေးလားဆိုပြီး အံ့သြမိပါတယ်။ ရှင်းလင်းပေးပါရစေ
ကျွန်တော် ဒါမျိုးရေးတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့ရဲ့ BLOG ရေးချင်တဲ့ဝါသနာ ကြောင့် ၊ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် ယုံကြည်တာကြောင့် ကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့ ဖခင် ၊ ကျွန်တော့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ (ကြွားတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့) ကျွန်တော် ဒီ ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အရာကို ကျွန်တော်5နှစ်သားကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော် မြန်မာစာ Font ကိုထားလိုက်ဦး English Font ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရိုက်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော် Internet ဆိုတဲ့အရာကို4တန်းမှာစသုံးတတ်ခဲ့တယ်။(ကျွန်တော့အဖေကို ကျွန်တော်ဒီကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ ကန်တော့ပါတယ်။) ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့အတွက် တစ်ပတ်ကို ဂျာနယ် နှစ်စောင် ယူတယ်။ ကျွန်တော် DVB ကို နေ့တိုင်း လိုလိုကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုး ငယ်ငယ်ကတည်းက ကွန်ပျူတာနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ၊ စာဖတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ဒါမျိုးမရေးနိုင်ဖူးလို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်က ထင်ပါသလား။ ကျွန်တော်ရေးသားလိုက်တဲ့ Blog က ကျွန်တော့အသက်အရွယ်နဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ Blog တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒိအတွက် ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ဖူး။ ကျွန်တော်ရေးချင်တာ ကျွန်တော် ထင်တာကို ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းကတည်းက ဒီမှာ ကျွန်တော်ရေးတာ Post 30 ကျော်နေပါပြီ။
ဒီလိုမျိုး ကိုးတန်းကျောင်းသား က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က န၀မတန်းကျောင်းသားဖြစ်မယ်လို့ ပြောသွားတဲ့ တကယ်ကို ၀မ်းလည်းဝမ်းနည်းမိ ၊ တကယ်လဲ ထင်မထားမိပါဘူး။ မရှင်းတာရှိသေးရင် Comment ချန်ထားခဲ့လိုက်ပါ။
ညီလေးကို အကိုကြီး လုံးဝ အထင်မသေးခဲ့ဘူး ဆိုတာကို
ဒီကွန်မင့် နဲ့ ဆန္ဒပြု ခဲ့ပါတယ်နော်
အထင်မသေးရဲပါ စာရိုက်တတ်တာ ၃ လ သာသာပဲရှိပါသေးတယ် ပို့စ်လဲ တစ်ခု သာတင်ထားဆဲပါ။
ဒီကထက် စာရင် အများကြီးသာပါတယ်။ ဝေဖန်တာ အမျိုးမျိုးတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော် ၊
ပြောတဲ့ သူတွေ ကတော့အွန်လိုင်းမှာဒီလိုတွေ တွေ့ ဘူးတာလည်းပါမယ်…အမအပါဝင်ပေါ့
အမကြုံဘူးတဲ့ တစ်ယောက်လည်း၁၅ နှစ်သားလို့ ပြောပြီး….ဘာသာပြန်အဖွဲ့ မှာ….အသက်၁၅ နှစ်ထက်ပို တြ့ အသိတွေ ရေးတယ်…..တကယ်တော့(သိသူများကသူဟာ၂၈ နှစ်လို့ ဆိုကြတယ်)
အမလည်းမသိချင်လို့ မမေးတော့ပါဘူး….ကိုယ်သူ့ အသက်စိတ်မ၀င်စားဘူး..သူဘာသာပြန်လေးတွေ ကြိုက်တယ်လေ။
တခုပေါ့…..သားငယ် က ကိုးတန်းလား…
တခြားဘလော့ ဂါတစ်ယောက်က…..အတန်းပညာအရည်အချင်း..(ဆရာဝန်လား..ဘာညာ အမတော့စိတ်မ၀င်စားဘူး)သူဘလော့ ကကောင်းရင်ဖတ်မယ်….။
လောကမှာ…မကောင်းတာပြောလည်းအပစ်မတင်ပါနဲ့ ..အခုနေသားငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အမကစာရေးပေးတာ
မကောင်းတာတွေပြောတာကြားတော့ဝမ်းနည်းတယ်..တိုးတက်ချင်လာတယ်…..ဒါဆိုသူ့ ကိုကျေးဇူးတင်လို က်…သူကြောင့်ကိုယ့်ဝမ်းနည်းပြီးပိုတိုးတက်လာလို့ ဘဲ…ပေါ။့ဟုတ်တယ်ဟုတ်
သားငယ်ရေ…လက်ချောင်းတွေ ကိုကြည့် အတိုအရှည်..အပိန်အတုတ်ကွာတယ်…
လူတွေ ရဲ့ စိတ်အတွေးက…သေးသိမ်တာရှိသလို..ပြည့်ဝတာရှိတယ်….
လူတွေ ကဘာဘဲပြောပြော..ချစ်လို့ ပြောတယ်ဘဲမှတ်ယူလိုက်နာပါ။
ရွှေတောင်မှမီးနဲ နာနာထိတွေ ထိုခတ်ပေးပါမှရွှေရည်တက်ပါတယ်….
♦ အခုလို လမ်းညွှန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမ ပြောသလို ဒီ့ထက် Post တွေတင်နိုင်သလောက် တင်ပါဦးမယ်။
ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် တော်နေလို့ မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ရတာမို့ (ကိုယ်ကသာ အမှန်အကန်ဆိုရင်) ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ Burma ရေ။
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အရာကို5နှစ်သားကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် Internet ဆိုတဲ့အရာကို4တန်းမှာစသုံးတတ်ခဲ့တယ်။
ကလေးအမေအိမ်ထောင်သယ်တွေကလဲ ပဲ တွေရောင်းကြ။တခြားပုံစံတွေလဲအများကြီးကွာ၊သိမှာပါ။
ကိုယ်ဝါသနာ ပါလို. ရေးတာကွာ သိပ်ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့
ညီလေးက အစ်ကို.ထက် အများကြီးသာပါတယ် အစ်ကိုဆို နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ဆယ်တန်းလာတက်ပြီး
စာမေးပွဲပြီးမှ ကွန်ပျူတာ ကိုစသုံးဖူးတာ အင်တာနက်ကို လည်း ထို့အတူပါပဲ 2008 ကပေါ့ မင်းလောက်တောင် သိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး ကိုယ်ဝါသနာပါတာ ကိုယ်လုပ်ရလို့ ကျေနပ်တယ် သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး
ညီလေး အဲလိုရှင်းလိုက်တော့မှ ညီလေးက အသက်ကြီးတယ်ပြောလို့ မခံနိုင်သလို ဖြစ်နေတယ်
ဟိတ်ကောင် ဘားမား။ ဟိုတခါ ငါမေးတာ မင်းမဖြေသေးဘူး။ ဘာလဲ ငါ့ညီမက မင်းနဲ့မတူမတန်ဘူး ထင်နေလား။ စပွန်ဆာ မရှိသေးတဲ့ မော်ဒယ်ဂဲကွ။ မရှိတာ မလာလို့မဟုတ်ဘူးနော် မရှာတာ။ မင်းလိုကောင်မျိုး စာမပြန်ရဲဘဲ ငြိမ်နေမှတော့ ဂျော်လကီးဖြစ်ရမယ်။ မင်းအသက်က ဒေါ်ရွှေပြေသလို အသက်ကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲဟေ့။ အဲဒါဆိုရင်တော့ စပွန်ဆာကြေးတင်မှရမယ်။ စာပြန်ပါ။
♦ နားဖောက်ဖို့ Case ကတော့ ၁၀ တန်းပြီးလို့ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်တစ်ခု ကိုယ့်ဖာသာကို ရပ်တည်နိုင်မှ ရှင်းလင်းကြတာပေါ့ ကိုကြောင်ကြီးရယ်. .. အသက်တော့အမှန်အကန်ကို Pure 15 ပါဗျ ၊ ၊ BEHS (.) D—n က န၀မတန်းကျောင်းသားအစစ်ပါဗျ
ဘယ်သူဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်နဲ့ ။
အင်း…အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ပါပဲ.. မင်းအသက်အရွယ်နဲ့ပြောရရင်..ဦးလေးတော့
ရှက်လာတယ် ။ ရှက်လွန်းလို့ သေသာသေလိုက်ချင်တော့တာပါပဲ…
၁၅ နှစ်လေး ရဲ့ တော်ချက် က မလွယ်ပါလား…။
ရေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်
ကြီးနေလို့ လျှော့မတွက်ရဲတဲ့ သဘောပါ။
ဘာမှ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မနေပါနဲ့
…တူလေး Burma အတွေးတွေ မများနဲ့…
…မင်းခုမှ မျက်နှာမလွှဲနဲ့..ငါမျက်လုံးရဲ.တည့်တည့် ကိုကြည့်….. (အဲ..ယောင်လို. စိုင်းစိုင်းသီချင်းနဲ့မှားလို့…။)
ဘာမှ အာရုံတွေမများနဲ. ကိုယ့်တူ..။ ကိုယ့်အတွေးအခေါ် ၊ကိုယ်ခံစားချက်၊ ကိုယ့်ဗဟုသုတ ကိုမျှဝေတာ ဘာကိုမှသိပ်မတွေးပါနဲ့။ စာဖတ်သူအပေါ်မှာ စိတ်ရင်မှန်၊ စေတနာမှန်ထားနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ စာရေးတာ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဒီအရွယ်နဲ့ စာရေးစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုကတည်းက ချီးကျူးသင်.နေပြီ….ဆက်လုပ်..ရဲဘော်…
အသိ ဆိုတာ အသက်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးကွာ..
ဒီလို လူငယ်တွေကို အားပေးတယ်။ လေးစားပါတယ်။
ကလေးတွေကို လျှော့မတွက်ရဲပါဘူး … တိုးတက်နေတဲ့ ဒီခေတ်မှာ … ကလေးတွ အရမ်းကို သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး .. လူပီသတာမြန်လွန်းတယ် … ကိုးတန်းကလေး ဒါမျိုးမရေးတတ်ဘူးလို့ … ဘယ်သူပြောပါလိမ့် နောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။
ရွာထဲက အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ သားလေးဆို .. နှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် … သူ့အမေနဲ့ ချက်တင်လုပ်နေတုန်း …။ သားလေးက ၀င်ပြောတာ .. လူတောင် ကြောင်သွားတယ် …တကယ့်ကို တတ်ပြီး .. ကွန်ပျူတာ သုံးတတ်တာ လက်ဖျားခါလောက်အောင် ချီးကျူးမိတယ် … ။ ပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးမှုနဲ့ … ရှင်သန်ရာဒေသ ကွာတာကြောင့်လို့ပဲ ကျွန်မတော့ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ် … ။
အများအကျိုး ရွက်သယ်ပိုးက ခမိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း မဖဲ့စကောင်းကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရှေးရှူ့နှင်လော့။ (ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ဘုရားကြီး)
ဒါပေမယ့်တချို့ ကအတည်ပေါက်နဲ့ နောက်တာလည်းရှိတယ်လေ
ကိုးတန်းကျောင်းသားက ပို့စ်တွေတင် ၊ ရှင်းလင်းချက်တွေထုတ် နဲ့ လူတတ်ကြီးလုပ်နေပါပေါ့လား။
ညီငယ် ဘမာ ရေ
မင်းကို အထင်သေးတယ် ဆိုကတဲက
မင်း အနိုင်ရနေပြီကွ သိလား
ဆက်ကြိုးစားပါ ညီငယ် Burma ရေ
Knowledge age မှာ ရှင်သန်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ အခွင့်အလမ်း၊ ၀ါသနာ ပါမပါပေါ်မူတည်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ကွာမှာပါ.. အသက် ကြီးတာ ငယ်တာ မဆိုင်ပါဘူး..
အစ်ကိုဆိုရင် အသက် ၂၅ ကျော်မှ ကွန်ပျူတာကို ကောင်းကောင်းထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာ
ခု အစ်ကို့သား ၃ နှစ်သားက address bar မှာ http://www.y8.com ရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားလို့ရတာ သိနေပြီ။ http://www.123kidtv.com ရိုက်ပြီး အေဘီစီ ကလေးသီချင်းလေးတွေ ကြည့်တတ်နေပြီလေ..
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြရမှာပါ.. ကြိုးစားကွာ
စိတ်မညက်ပါနဲ့ ညီရေး .. အားတင်းထား .. ၀ှက်မထားနဲ့ ထုတ်သာပြလိုက် http://myanmargazette.net/143648/uncategorized-other/copypaste/comment-page-1#comment-246287 ငိုင်မနေချမ်းဘာနက် ..။ ဖိုက်တင်း ..။